June 2022 - Newposts
အမေကို ချစ်တဲ့သူတိုင်း ဖတ်ကြည့်ပါ
မျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ နင့်မှာ ဘာစောက်လုပ် ရှိလို့လဲ. ပိုက်ဆံတွေ အရမ်းသုံးဖြုန်း နေရတာ. ဟာ. အမေကလည်း ကျွန်ုပ်ဆိုရင် အမြဲအကောင်းမမြင်ဘူး. ဟဲ့ မသကောင် ငါ ပြောတာ ဘာမှားလို့လဲသေချင်စိုးလေရဲ့. အမေ သားကိုဘဲ ဆဲနေတာပဲ တော်ပြီဗျာ. အမေ့ကို မနှိပ်ပေးတော့ဘူး. မနှိပ်ပေးလည်း နေ. ကြွကြွ […]
ညဘက် ဖုန်းကို ခေါင်းအုံးဘေးချအိပ်တတ်သူများအတွက် ဆိုးကျိုးများ
မဟာတန်း ကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသင်္ဂြိုလ်ခါနီး မိခင်မှ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နမ်းလိုက်တဲ့အချိန် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင်
မဟာတန်းကျောင်းသူလေးအသုဘမီးသင်္ဂြိုလ်ခါနီးမိခင်မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ..ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင် တိုးတက် ခေတ်မီ ချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီ နေကြပြီး ရှေးဟောင်း အယူသည်းမှုတွေ ကိုတော့မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။ သေရွာပြန် လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မ ဝင်ခိုင်းပါနဲ့။ သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။လူကို လူလို့ပဲမြင်ပြီး လူ […]
အမျိုးသမီးများတွင် ရှိတတ်သော ထင်ရှားသည့်မှဲ့ (၇)မျိုး အကြောင်း အပြည့်အစုံ…
ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ။ မိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်လို့ မှဲ့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေမှာဆိုကြပါတယ်။ အဓိက မှဲ့တွေပေါ့။ အဲဒီ မှဲ့ (၇)မျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့ …. ရတနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တဲ့မှဲ့ရယ်။ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (ဘယ်ဘက်) မျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီး (ညာရယ်) နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ […]
ဆီးကျောက်ကြေစေတဲ့ “ဗေဒါပင်နှင့် ဗေဒါပွင့်သုပ်”
အပင် ဗေဒါပင် အရင့်တွေ အနည်းငယ်ဖယ်ရှားပြီး သုံးပင်ယူပါ။လက်တစ်လုံးလောက်စီ ကိုဖြတ်ပါ။ ၎င်းဗေဒါများကို ဝက်သား( ၂၅ ) ကျပ်သားဖြင့် စားကောင်းအောင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အကုန်ထည့်ပြီး ချက်ပါ။ ဝက်သားနူးနပ်သည်အထိချက်ပြီး ထမင်းနဲ့ပဲစားစား ဒီအတိုင်း ထမင်းလွတ်ပဲစားစား ကုန်အောင်စားပေးပါ။ တစ်ခါစားနဲ့ ကျောက်များကြေပြီး ကျပါတယ်။ အပွင့် ဆီးကျောက်တည်သူများ ဆီးစပ်ကိုက်၍ […]
စိတ်တွေပင်ပန်းနေချိန်လေးမှာ ကြိုက်တဲ့အသည်းပုံလေး တစ်ပုံကိုရွေးကြည့်နော် 🙆
စိတ်တွေပင်ပန်းနေချိန်လေးမှာ ကြိုက်တဲ့အသည်းပုံလေး တစ်ပုံကိုရွေးကြည့်နော် 🙆 ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားလေးနဲ့ပတ်သ‌တ်ပြီး ပုံလေးတွေအောက်မှာ စာလေးတွေရေးပေးထားတယ်နော် (၁ ) ဒီကဒ်လေးကိုရွေးတဲ့မင်းလေးက စိတ်ခံစားမှူထပ်ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးသူလေးပေါ့တစ်ခုခုဆိုပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ခေါင်းမာတတ်တာလေးကလည်း မင်းလေးရဲ့ မေ့ထားလို့မရတဲ့ ပုံစံလေးပေါ့တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေမေ့အောင်အလုပ်တွေကိုပိုလုပ်တတ်တဲ့သူလေး ခုချိန်မှာတော့ အရင်နဲ့မတူဘဲစိတ်တွေကလွှင့်မျောနေတတ်တယ် အရင်ကအရာရာတိတိကျကျလုပ်ချင်စိတ်ရှိသလောက် အခုတော့ အရာအားလုံးကိုစိတ်ကလွတ်ချထားတတ်တယ် ခုချိန်မှာ မင်းတွက်ထပ် မင်းမိသားစုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုပိုပူပန်နေတတ်ပါတယ်အရင်နဲပမတူဘဲညိုးနေတဲ့မင်းလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုပြင်လိုက်ပါအုံးနော်မင်းသွားချင်နေတဲ့တောင်တန်းတွေအေးချမ်းတဲ့ခရီးဒေသတွေကိုမကြာခင် မင်းသွားရမှာပါအခုတော့အားတင်းထားပါနော် 💛💛💛 […]
မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော်
မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော် မတည့်တာကိုမှ စားချင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်းများ ၁။ လက်ဖက်ကို အမြဲနိုင်တာ လျှက်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေ၊ လေပွ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် မဖြစ်အောင် လက်ဖက်သုပ်စားပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာရင် လျှက်ဆား၊ ကိုးပါးဆေး၊ မဟာဖြေဆေး စတဲ့ […]
အရမ်းကြီးချွေတာစရာမလိုပဲ အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆)ခု
အရမ်းကြီးချွေတာစရာမလိုပဲ အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆)ခု ၁။ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို အသေးစိတ် ရေးမှတ်ထားပါ။ ငွေတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးလိုက်တယ် ဆိုတာကို သိထားရင် ငွေတွေကို အရမ်းမသုံးစေတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်သုံးလိုက်တဲ့ ငွေတွေကို စာအုပ်သို့မဟုတ် app တစ်ခုထဲမှာ ရေးမှတ်ထားပါ။ ထွက်ငွေကို ရေးမှတ်တတ်တဲ့အကျင့်က ငွေ့စုဖြစ်စေဖို့ အရမ်းကို […]
၃၆၆ မိုင် ၃ ဖာလုံ ( သို့မဟုတ်) ခရီးသွားများ သတိထားရမည့် ရန်ကုန် မန္တလေးအမြန်လမ်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ခရီးသွားများ သတိထားဖို့ပါ ၃၆၆ မိုင် ၃ဖာလုံ ( သို့မဟုတ်) မိတ်ဆွေတွေအတွက် သိနေပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ တနှစ်တစ်ခေါက်လောက် ရုံးပိတ်ရက် အလည်သွားမဲ့ […]